mercredi, 25 mars 2020 22:01
Fanampiana ireo zokiolona: Natomboka androany ny fizarana ny « Vatsy TSINJO »
Zokiolona manodidina ny 10 400 isa no hisitraka ity « Vatsy TSINJO » ho an'Antananarivo sy Toamasina. Nanomboka androany alarobia 25 marsa 2020 ny fizarana ireo fanampiana, izay fanampi-tsakafo toy ny vary, menaka, macaroni, sardine, sira… tamin'ireo Fokontany eto Antananarivo Renivohitra.
Niara-nanatanteraka izany ny fiadidiana ny raharaha Sosialy eo anivon'ny fiadidiana ny prezidansa (DASP), ny avy eo anivon'ny Minisiteran'ny Mponina, ny Association Fitia ary ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
mercredi, 25 mars 2020 20:03
Fandoavana faktiora: Manazava ny fampiharana ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika ny JIRAMA
Nitondra fanazavana mikasika ny fanemorana ny fanefana ny faktiora volana martsa 2020 ny mpitantana ny orinasa Jirama, androany, ho fampiharana ny fanambaran’ny Filohan’ny Repoblika ny alin’ny 24 martsa 2020, mikasika ny Drafitra ara-tsosialy amin’ny hamehana.
Voalaza tamin’izany fa afaka aloa in-dimy miantoana ao anatin’ny 5 volana ny faktiora izay tsy naloa rehefa miverina amin’ny laoniny ny fiainana andavanandro.
Manana safidy ihany koa anefa ny mpanjifa raha hanefa avy hatrany ny faktiora tsy voaloa na ho zaraina 10 volana ny handoavana izany, izay hifampiresahina amin’ny JIRAMA.
Mampahafantatra ihany koa ny Jirama fa ireo faktiora efaina tsikelikely dia hozaraina miaraka amin’ny faktioran’ny fandaniana isam-bolana.
mercredi, 25 mars 2020 19:42
mercredi, 25 mars 2020 16:58
Coronavirus: France objectif 20 000 tests par jour
Selon la recommandation de l’organisation mondiale de la santé (OMS), "tester, tester, tester", la France a pour objectif de multiplier à 20 000 tests par jour la semaine prochaine, si 9000 tests par jour sont réalisés actuellement.
La France compte 1100 morts avec 22 300 cas confirmés actuellement. Hier mardi soir, 240 décès annoncés en 24h.
mercredi, 25 mars 2020 16:47
Antananarivo Renivohitra: Mangadihady teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena
Voahodidina mpitandro ny filaminana ny fidirana ny afovoan’Antananarivo androany alarobia 25 marsa, andro fahatelo fihibohana an-trano ho fisorohana ny fihanahan’ny valanaretina coronavirus.
Nangadihady teny Analakely sy ny Araben’ny Fahaleovantena.
(Sary: Andry Rakotondrainibe‎)
mercredi, 25 mars 2020 15:17
Comores: Nifatratra tamin’ny andrinjiro ny fiara nitondra ny filoha Azali Assoumani
Niharan-doza ny fiara nitondra ny filoham-pirenen’i Comores, Azali Assoumani, manatanteraka fitsidihana ao Anjouan. Nilaozan’ny hisatra teny ampandehanana ilay fiara, ka hany nataon’ny mpamily dia ny nampidofotra azy tamin’ny andrinjiro nampijanonana ilay fiara raitra.
Na teo aza ny loza dia nanohy ny fitsidihana tanterahiny ao Anjouan hatrany ny filoha Azali. Misokatra kosa ny fanadihadihana mikasika ity loza nanjo ny fiara nitondra azy ity. Hasomparana ? olana ara-mekanika ? Lesoka amin’ny fikojakojana ? … Santionany amin’ny fanontaniana mipetraka ireo manoloana ity loza ity, fiara raitra rahateo no niharan-doza.
mercredi, 25 mars 2020 14:38
Ankadinondry RN1: Fiarabe mitatitra entana maro nihitsoka tsy navela handeha
Nitaraina ireo mpitondra kamiao, mitatitra entana, noho ny sakana teo Ankadinondry Sakay amin’ny lalam-pirenena RN1, tsy namelana azy ireo hitatitra vokatry ny tany hiazo an’Antananarivo.
Nanazava Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien, minisitry ny fambolena sy fiompiana ary jono niainga avy eny amin’ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus, eny Ivato, ny antoandron’ity alarobia 25 marsa 2020 ity fa afaka mandeha ny fiara mitatitra ireo entana ilain’ny mponina, fa ny olona kosa tsy maintsy manaja ny fepetra noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, anisany ny fakana hafanan’ny vatana ary ny fanajana ny bokinandraikitra mifehy ny fiara vaventy.
mercredi, 25 mars 2020 14:14
Ambatondrazaka - Seranam-piaramanidina Feramanga: Vita tara 100% ny làlana
Vita tara 100% ny lalana mampifandray ny tanànan’ Ambatondrazaka, renivohitry ny Faritra Alaotra Mangoro amin’ny seranam-piaramanidina Feramanga. Efa mipetraka avokoa ny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manamorona ny lalana sy ao amin'ny seranam-piaramanidina, efa vita koa ny soritra amin'ny lalana.
mercredi, 25 mars 2020 14:05
Coronavirus: Tsy nisy tranga vaovao tao anatin’ny 24 ora
174 ny fitiliana vita hatry ny omaly 24 marsa 2020 sy ny mitatao vovonana teo. 19 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'ny zoma 20 marsa 2020, tsy nahitana soritraretina ny 18 tamin’ireo, iray ihany no narary saingy efa mihatsara ny fahasalamany amin’izao.
Tsy nisy fiovana ireo tarehimarika ireo tao anatin’ny 24 ora farany, araka ny fampitam-baovao nataon’ny mpitondratenin’ny Foibe fibaikoana momba ny Coronavirus, Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle androany tamin’ny 1ora teo.